मूल सलाद "बैंगनी": विभिन्न विकल्प पकाउने
सलाद "बैंगनी" सुरक्षित छुट्टी तालिका आपूर्ति गर्न सकिन्छ कि एक आश्चर्यजनक सुन्दर वसन्त पकवान प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो यस्तो पाक सिर्जनाहरू को तयारी को लागि विकल्प त्यहाँ ठूलो विविधता छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, कुल अझै पनि तिनीहरूलाई बीच छ - सुन्दर फूल को रूप मा सजावट को एक तरिका हो।
त्यसैले, आज हामी तपाईंलाई मूल र स्वादिष्ट व्यञ्जन तयार गर्न दुई फरक तरिकामा परिचय हुनेछ।
पफ "बैंगनी" सलाद: वसन्त व्यञ्जन लागि चरण नुस्खा द्वारा एक कदम
कोमल र को तयारी को लागि असामान्य सलाद खरिद गर्न आवश्यक हुनेछ:
धूम्रपान छम स्वादिष्ट - 300 ग्राम;
pitted छाँट्दछ खट्टे - 200 ग्राम;
सानो ताजा मशरूम - 400 ग्राम;
तीव्र कोरियाली गाजर - 200 ग्राम;
ककडी मध्यम आकार -2पीसी;।
नुन, सूर्यमुखी तेल, pimento पाउडर - मशरूम frying समयमा स्वाद थप्दै;
बोसो मेयोनेज - स्नेहन तहहरू लागि;
ताजा मुला ठूलो - inflorescences सिर्जना गर्न;
चिकन अण्डाको पहेंलो भाग पकाएको - यो अमृत नकल गर्न;
; एक "पट" सिर्जना गर्न - बिस्कुट shortbread सानो
पालुङ्गो पात - सबै भोजन सजाने।
सलाद "violets" फूल र घर सर्छ प्रेम गर्नेहरूलाई बीच एकदम लोकप्रिय पकवान छ। आखिर, यी Housewives फूल र उत्सव तालिका सजाउनु मौका सम्झना छैन। तर तपाईं मूल पकवान सिर्जना अघि, तपाईं खरिद सबै उत्पादनहरु प्रशोधन गर्न आवश्यक छ।
यो एक सुगन्धित धूम्रपान छम लिन हड्डी र छाला देखि मासु अलग र त्यसपछि सूक्ष्मता काट्नु आवश्यक छ। त्यसै गरी, धमाकेदार pitted छाँट्दछ प्रक्रिया गर्नुपर्छ। यो एक यस्तो सुकेको फल तपाईं पनि अम्लीय पायो भने, यो, विधवा संख्या घटाउन अन्यथा पकवान हामी चाहनुहुन्छ रूपमा यति राम्रो बाहिर हुनेछ आवश्यक छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
साथै, सलाद "बैंगनी", जो हामी आज विचार गर्दै नुस्खा, यस्तो खीरे र मशरूम रूपमा सामाग्री समावेश छ। यो तीतो छ, र त्यसपछि पातलो स्ट्रिप्स मा कटौती यदि तरकारी, धुन, बोक्रा आवश्यक छ। Fungi पनि सूक्ष्मता सूर्यमुखी तेल मा टुकडे करो र भुट्नु गर्न आवश्यक नरम, पहिले नुन र मरिच संग अनुभवी सम्म छ।
सजावट लागि उपचार सामाग्री
सुन्दर डिजाइन पेश व्यञ्जन पालुङ्गो पात rinsed हुनुपर्छ लागि, धेरै सूक्ष्मता को मुला धुन स्लाइस यसलाई काट्नु। एक अन्डा जोश यो एक ठूलो grater मा ठाडो पहेंलो भाग र दल्नु हटाउन पनि आवश्यक छ।
गठन व्यञ्जन प्रक्रिया
सलाद "बैंगनी" एक सजावट घन्टी अप 10-13 सेन्टिमिटर संग सानो समतल प्लेट मा portioned भोजन को रूप मा गठन गरिएको छ। निम्नानुसार यो पाकशाला सिर्जना सिर्जना: को cookware को तल जस्तै धूम्रपान छम, खट्टे कटा छाँट्दछ, उत्पादनहरु राख्न तहहरू चयन हुनुपर्छ तला मशरूम, ककडी र मसालेदार कोरियाली गाजर। यस मामला मा, यी घटक सबै, बोसो मेयोनेज चिकनाना सुनिश्चित।
को सलाद पछि, "violets" यसलाई आफ्नो सजावट सुरु गर्न सुरक्षित छ, गठन गरिनेछ। यसो गर्न, तपाईं ध्यान सजावट घन्टी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पकवान छेउमा shortbread सानो को माध्यम द्वारा बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छ। अर्को, सतह यो घरेलू फूल को पात mimicked भनेर ताजा पालुङ्गो संग सलाद प्रशस्त गर्नुपर्छ। को greenery को अन्त्यमा सुन्दर मुला (तिनीहरूलाई rosettes को रूप मा राख्न) को पातलो स्लाइस राख्नु आवश्यक छ, र केन्द्र मा एक सानो कसा भयो अण्डाको पहेंलो भाग खन्याउन। यी कार्यहरू फलस्वरूप, तपाईं यसलाई फ्रिज मा 50-6o भन्दा बढी कुनै मिनेट सहन मनमोहक छ कि एक मूल र धेरै सुन्दर पकवान प्राप्त र त्यसपछि पाहुनाहरूलाई सेवा गरे।
मिश्रित सलाद "बैंगनी": नुस्खा, खाना फोटो
यो पकवान अघिल्लो एक भन्दा धेरै छिटो पकाएको छ। यसको संरचना सबै सामाग्री, यो, प्रशोधन गर्न सँगै मिश्रण र एउटै तरिकामा सजाउनु आवश्यक छ।
यस्तो असामान्य सलाद लागि, हामी आवश्यक:
खुशबूदार छम - 150 ग्राम;
पनीर - 105 ग्राम;
उबला चिकन अन्डा -3पीसी;।
ताजा साग - एउटा सानो बीम;
लसुन - 1 सानो ल्वाड़;
ताजा मुला - सजावट लागि;
मेयोनेज - विवेकमा थपियो;
ताजा पालुङ्गो - सजावट लागि।
एक सलाद जस्तै को गठन अघि तपाईंले सानो घन स्वादिष्ट छम, उबला अन्डा (तर एक पहेंलो भाग) कटा ताजा साग मा काट्नु र अंगीठी लसुन र पनीर गर्न आवश्यक छ। तपाईं पनि सजावट को लागि उत्पादन तयारी गर्नुपर्छ: पालुङ्गो को पात कुल्ला, मुला पातलो स्लाइस, एक चम्चा संग सुन्दर चिकन पहेंलो भाग दबाउन मा कटौती।
मिश्रित सलाद "बैंगनी", जसको नुस्खा धेरै सरल छ, एकदम छिटो र सजिलै गठन। यसो गर्न, तपाईं यस्तो छम, अन्डा, साग, grated लसुन र पनीर रूपमा मेयोनेज सामाग्री संग एक कचौरा र स्वाद जडान गर्नुपर्छ। यसबाहेक, ठूलो potting प्रकार को रूप मा बाहिर राख्नु, र पालुङ्गो, मुला र चिकन अन्डा yolks संग साथै अघिल्लो नुस्खा मा शीर्ष सजाउनु आवश्यक छ।
छोराछोरीको जन्मदिन लागि सलाद: केही रोचक विचार
सरल उत्पादनहरु को द्रुत सलाद: व्यञ्जनहरु, सामाग्री, सुझावहरु Housewives
दुपट्टा कुरा: ठीकै सुरुचिपूर्ण, सामयिक
कि बच्चाहरु पोस्ट बप्तिस्मा छन्? आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ
म रजिस्ट्री कार्यालयमा दर्ता बिना विवाहित प्राप्त गर्न सक्छन्? धार्मिक भन्सार
Hepatitis सी प्रसारित सबैलाई कसरी थाहा हुनुपर्छ छ बारे
कति तरिकामा अफीम आकर्षित गर्न
"वन परी कथा", वोरोनिश फोटो र समीक्षा। जाडो र गर्मी मा आराम
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा गोलो टेबल "मानव अधिकार र बाल हेरविचार र शिक्षा को अधिकार" पारित हुनेछ
Outbuilding: यो भवन के हो र यसको मुख्य कार्य के हो?